U-Emmanuel College Admissions: Izikolo ze-SAT, Uncedo lwezeMali
Emmanuel College I nkcazelo:
Eyasungulwa ngo-1919, i-Emmanuel College inxulumene ne-International Pentecostal Holiness Church, kwaye igxininise inkolo yayo kwizifundo zombini kunye nemisebenzi yechungechunge. Ekuqaleni wabizwa ngokuba yi-Franklin Springs Institute, isikolo sanikezela ngokudibeneyo kwezikolo eziphakamileyo kunye neikholeji. U-Emmanuel College waqanjwa ngokutsha ngo-1939, waza wafumana imvume yokungama-2 ngonyaka ka-1967 (kunye nokuvunyelwa kwayo kweminyaka emine ngo-1991).
Abafundi banokukhetha ukusuka kuma-jors angaphezulu kwama-30, kunye nezinye iinqununu ezithandwa kakhulu eziquka ukuFundiswa kweNzululwazi, izifundo zoPhulo, kunye noLawulo lwezoShishino. Izifundo ziyaxhaswa ngumlinganiselo ophilileyo we-12 ukuya ku-1 womfundi / umgaqo-faculty. Ngaphandle kweklasi, abafundi bangajoyina iqela leeklasi kunye nemisebenzi. Ezi zivela kwiqela lezemfundo (Iqela leMbali, i-Sigma Tau Delta, iQela leNzululwazi), ukwenza iiklabhu zobugcisa (i-Club Actors, uMphathiswa weDaniso, iChoir), kunye nemisebenzi yenkolo (Iprojekthi Yokudumisa, i-Baptist Collegiate Ministries, iNkonzo yoNqulo). Abafundi banethuba lokuya kwiinkonzo zecawa nganye ngeveki, kwaye isikolo siququzelela iinkqubo zokufikelela kwindawo yoluntu. Kwi-front yezemidlalo, i-Emmanuel College Lions ukuncintisana kwiCandelo le-NCAA ye-II, kwiNgqungquthela yaseCarolinas . Imidlalo evelele ibandakanya uMzila kunye neNkundla, iNgcahla, iBhola yeBhola, kunye ne-Volleyball. Imidlalo yesikolo yezemidlalo yamadoda 15 kunye nemidlalo ye-15 yabasetyhini.
Ipesenti yabafakizicelo bayamkelwa: 41%
SAT Ukufunda okubalulekileyo: 410/540
UMTHETHO WOMTHETHO: 18/21
UMSEBENZI IsiNgesi: 18/21
UMTHETHO UMathe: 18/21
Ubhaliso lwabonke: 920 (bonke abagqwesileyo)
Ukuhlukana kwezesini: 52% Amadoda / 48% Abasetyhini
Imfundo kunye neMali: $ 19,330
Iindleko ezipheleleyo: $ 29,230
U-Emmanuel College Financial Aid (2015 - 16):
Izibonelelo: $ 12,106
Imali: $ 5,513
I-Majors Eyaziwayo kakhulu: Ukuzivocavoca kweNzululwazi, ukuPhathwa koLawulo lokuBala / ukuPhathwa kweeMpilo, iMfundo yabantwana abaselula, Izifundo zoPhulo, Ukucebisa, iNzululwazi, ukuPhathwa kwezoBuchule, i-Biology
Ukugcinwa kwabafundi beNyaka yokuqala (abafundi bexesha elipheleleyo): 55%
Ukukhutshwa kwezinga: 45%
Izinga lokuQinyezelwa kweNyaka-6: i-27%
Ezemidlalo zaMadoda: I- Track and Field, iLacrosse, iNgcahla, iBhola yeBhola, iBhola, Ukubhukuda, iVolleyball, iTennis
Ezemidlalo zaBasetyhini: Iqonga lebhola, i-Softball, iVolleyball, i-Track and Field, iBhola lebhola, iBholing, iGolf
Unomdla ku-Emmanuel College? Unokuphinde ufune ezi Kholeji:
Ikholeji yasePiedmont: iProfayili
I-Armstrong State University: Iprofayili
IYunivesithi yaseColumbus State: Iprofayili
Ikholeji yaseLaGrange: iProfayili
I-University of Kennesaw State: Iprofayili | I-GPA-SAT-ACT IGrafu
Isitatimende Somsebenzi Weekholeji ka-Emmanuel:
isitatimende somsebenzi kwi-http: //www.ec.edu/about-ec
"Ikholeji yase-Emmanuel i-arts-centered liberal institution ezama ukulungiselela abafundi ukuba babe ngabafundi abafana noKristu abadibanisa ukholo, ukufunda nokuphila kwimisebenzi ephumelelayo, i-scholarship and service."
I-NEW UNITED POSITZ
Izicwangciso zoShishino: Izikhokelo zabangenayo